Daawo: Haji Farah oo qirtay in waalidiinta soomaalidu ku fashilmeen barbaarinta caruurta | Somaliska
Haji Farah oo ka mid ah odayaasha sida weyn looga yaqaano Stockholm qaasatan xaafada Rinkeby ayaan dhawaan wareysi uu siiyay telefishinka SVT si qiiro leh u qirtay in waalidiinta Soomaalidu ay ku fashilmeen barbaarinta caruurta.
“Waan qiranayaa waalid ahaan in aan ku fashilanay barbaarinta dhalinyarada. Ma ahan in aan 15-sano jir kala sheekaysto dhimashada balse waxay ahayd in aan kala hadalno mustaqbalkooda iyo qofka ay noqon karaan iyo shaqada ay heli karaan balse rajadaas ma jidho” ayuu yiri Haji Farah.
Isagoo midaasi ku tilmaamay niyad-jab. Daawo:
taaas wuu khaldanyhy xajigu ma sina walidiintu, fikirkeykana inu isku wado qaado mahayn waxa jira walidiin soomaali ah o badan o wax baratay caruurtooda, wanaag la jecel garab, taagnayeen ila hadana ay garab taaganyihiin, ma jiro waalid ilmihiiisa la jecel dhimasho iyo nolol xun. teda kale waxa jira ciyaaal badan o maqlay wadankaaan walid waxba kuma dhiho karo oo beerta galay taaasna waalidku khalad kuma leh sababto ah awood u ku qabsado ama ku xirto maleh isaga ba halis ugu jira in inta uso hartay laga qaaato marka wax badan ayu isku khalday bay ila tahay ani laga yaabe inay dhiiri galin ka tahay allahu aclam.
waa odaay walan waliidiintu ma isku miidba
Xaajiga somalida rinkeby degan iyo nawaaxigeda xaalada eey kusuganyihiin ayuu kahadlay ee somalida sweden kunool oo dhan kamuusan hadlin ayaan filayaa.
Yaab qofka walba dadkiisa Ayuu caay iyo aflagaada ula soo taagan yahay. Somali Allaa u Maqan.
Waa in mid la fahmaa dhibatada uu ka hadlay Odeyga iney tahay mid jirto iyo mid kale. Hadeysan somalida qiran dhibka ka heesta barbarinta carurta KU nool Sweden, wey adkaane in wax laga qabto dhibka heesta caruurta somaliyeed.
Xaji gu waxaa qaadaa qiiro lkn
Waxaan lakanet intuu is dejiyo
Ileen hadalkiisug duubis ayuu gelayaaye